विद्या बालन फिल्म उद्योग छोड्न चाहन्थिन् ! – Enayanepal.com
विद्या बालन फिल्म उद्योग छोड्न चाहन्थिन् !
चैत, एजेन्सी । दमदार अभिनयबाट आफ्नो पहिचान बनाएकी अभिनेत्री विद्या बालनलाई एक समय फिल्म उद्योगलाई छोडिदिन चाहन्थिन् ।
आफ्नो करिअरमा असफलताको स्वाद चाखिसकेकी विद्याका अनुसार, उनले आफ्नो जिन्दगीमा घटेका थुप्रै घटनाबाट सिकेकी छिन् । उनी त्यो दिनलाई कहिल्यै भुल्दिनन्, जब अभिनेता आमिर खानका कारण उनको अहंकारमाथि चोट पुगेको थियो ।
विद्या भन्छिन्, ‘म एक शोक सभामा गएकी थिए, त्यहा फिल्म उद्योगबाट म मात्रै उपस्थित थिए । मिडियाबाट आएका पत्रकारले मेरो तस्विर खिचिरहेको थिए । तर, जब आमिर खान आए सबै मिडिया मलाई धक्का दिँदै आमिरतिर कुदे । यो घटनाले मेरो मनमा ठूलो धक्का लाग्यो । त्यसपछि, जो तपाईभन्दा सफल छ, मानिस उसैको पछि मात्रै कुद्छ भन्ने मैले थाहा पाए । मलाई त्यस समय नराम्रो पक्कै लागको थियो तर आज म ति चीजतर्फ ध्यान दिँदिन ।’
आज कुनै पनि महिला प्रदान फिल्मका लागि जो–कोही निर्देशकको पहिलो रोजाईमा विद्या पर्छिन् । धेरै प्रकारका आलोचनाका बावजुद पनि आज उनी यस स्थानमा छिन् र यसको श्रेय उनी आफ्नो जिद्दिपनलाई दिन्छिन् । विद्याको करिअरको सुरुवातमा ‘परिनीता’ र ‘मुन्ना भाई…’जस्ता फिल्मबाट निक्कै प्रशंसा बटुलेकी थिइन् ।
हिजोआज विद्या आफ्नो आगामी फिल्म ‘बेगम जान’को प्रचारमा व्यस्त छिन् । श्रीजित मुखर्जीद्धारा निर्देशित यस फिल्म एप्रिल १४देखि रिलिजमा हुँदैछ ।